Wararkii ugu dambeeyey caalamka & warqabadka SBC International – SBC
Wararkii ugu dambeeyey caalamka & warqabadka SBC International
Posted by editor on Apriil 30, 2011 Comments
Wararka SBC ee caalamka waxaa ugu waa weyn Taliban oo shaacisey in ay dagaalka sii xoojin doonto, Nato oo diidey xabad joojinta uu ku baaqay Qadaafi & warar kale.
Ururka Dhaalibaan Oo Ku hanjabay In ay sii xoojin doonaan weeraradooda Ay ka awadaan Afgaanistan.
Saraakiisha taalibaan ee ka dagaalanta wadanka Afgaanistaan ayaa waxaa ay kuhanjabeen In ay Sii laba jibaaari doonaan Weerarada ay Ku qaadayaan ciidamada ajaaniibta ah ee Ku Sugan dalka Afgaanistaan Iyo ciidamada dowlada Afgaanistaan.
Bayaan Ka Soo baxay Xarakada taalibaan Ayaa Waxaa Lagu sheegay In dadka shacabka Ah Ay ka fogaadaan Goobaha Ay Ku Suganyihiin Ciidamada NATO Iyo kuwa Dowlada Afgaanistaan iyagoo Sheegay In ay Suuragal Ay tahay In qaraxyo iyo weeraro kale ay Ku qadaan.
Hanjabaadan ayaa waxaa ay Ku Soo Beegmaysaa Iyadoo Dhawaan Saraakiisha ciidamada caalamiga ah ee ku Sugaan dalkaasi ay Sheegeen in ay iyagona Xeelado kale u Adeegsan doonaan la dgaalanka Alqaacida iyo talibaan.
Dowlada maraykanka Ayaa wax Layaableh ku tilmaamtay Istiraatijada ay Adeegsanayaan Ciidamada taalibaan Iyadoo Ay ugu dambeesay tii Ay ku badbadayeen Ilaa 40 qof Oo Ay u badnaayeen maxabiis talibanai ah oo Ay si xirfadeysan Uga Sii daayeen xabsi Ku yaala Magalaada qandahar.
Dowlada Maraykanka Oo Cunaqabateen Ku Soo rogtay Qaar kamid ah madaxda Suuriya.
Madaxweynha Dowlada Maraykanka Brak Obama Ayaa waxaa uu Sheegay in dowladiiso Ay cunaqabateen caalami ah Ay Ku soo rogtay Sirdoonka Suuriya Iyo qaar kamid ah Shaqsiyaadka Ku Jira xuukumada suuriya Kuwaas Oo ay Ku Eedaysay In Ay qeyb kayihiin Dhibaatooyinka Logu haayo dadka banaan baxyada Ka wada dalkaasi.
obma Waxaa uu Sheegay in Cunaqabateebta Ay saareen dalka Suuriya Aysan Iminka saameen Doonin Madaxweynaha dalkaasi Bashaara Alasad balse waxaa uu Sheegay In hadii dhibaatda wadankaasi ay Sii socoto Ay lagamarmaan Ay tahay In isaga qudhiisa cunaqabateen lasaaro..
Dadka Sida toos Ah U sameynaysa cunaqabateebta Maraykanka Ee suuriya ayaa waxaa kamid Ah wiilka Uu Dhlay madaxweynaha Suuriya Bashaaral asad Oo lagu magacaabo maahir asad, najiib Oo kamid ah qaraabada Madaxweynaha Iyo Shan kamid Ah Sirdoonka dalakaasi.
Madaxweynaha Dowlada Maraykaanka ayaa waxaa uu Sheegay In markaan n kadib Aan Indhaha laga Dhaawan karin Dhiiga sida gardarada ah Ugu daadanaya wadankaasi.
talaabadan Ay qaaday Dowlada maraykanka ayaa waxaa Ay imaanayasa Iyadoo cadaadiska dibulomaasiyadeed ee la Saarayo xukuumada baashaaral asad Oo Sii Kordhaayo._-
khasaariihii Duufaanta marykanka OO La soo bandhigay.kooxha gargaarka Ee Ku Sugan koonfura marayknaka Ayaa waxaa ay sheegeen In turada dhimshada ay gaartay 337 Qof Ilaa Iyo 7 state Oo ka tirsan Koonfurta Maraykanka oo Ay Ku jirta 238 Oo Ku dhintay Gobolka Alabama oo kali ah Taas oo lagu tilmamay tii Ugu khasaaraha badneed tan iyo bishii March sanadii 1932 Oo duufaano xoogan ay ku dhufteen wadanka Marayknak.
Boqaal qof,hadii Aysan Aheyn Kumaan kun Ayaa Ku dhaawacmay duufaantaasi halka Malaayiin dadka ay Ku gorya waayeen gobolka Alabaama.
Dowlada Marayknakna waxaa ay Sheegtay In Si dadkii Ku waxyeelobay Dhuufaantiisi Logu soo ciliyo noolashooda si caadi Ah ,gaar’ahaan ganacsigooda iyo Dhqaalahooda In bankiyada marayknaka laga Soobixiyo Dhaqli laxageed oo dadkaasi noolashooda lagu badbaadinayo.
Mucaardka liibiya Iyo NATO oo Diiday xabadjoojintii Uu ku Dhawaqay hogaamiyaha dalka Liibiya.
Afhayeen U hadlay falaagada Liibaya Ayaa waxaa Uu Sheegay In Aysan Doonaynin In Ay xabad joojin Ay la galaan Hogaamiyaha liibiya mucaamar alqadaafi Islamarkaasna ay Sii wadi doonaan dagaalada ay uga Soohorjeedaan.
Cabdi xafiid Oo Ah Afhayeenka golaha mucaaradka ayaa waxaa uu Intaasi ku daray In hadalka hogaamiyaha Liibiya uu san laheyn mid ficil Len balse uu yahay oo kaliya hadal Aan ka soo qaad laheyn.
Sidoo Kale Saraakiisha iidamada Neto ee howlgalada ka Dhanka Ah Xukuumada liibiya kawada dalkaasi liibiya ayaa waxaa Ay sheegeen in Ay san jiri doonin wada xaajood Dhexmara iyaga iyo Mucamaar alqadaafi iyagoo sheegay In laga soo gudbay waqtigii wadahadalka Uu furnaa.
waxaana Ay durbadiiba ay maanta Duqeen horleh Ay ka geesteen waqooyiga magaalada Tiriboli Ee Caasimada dalkaasi walow Aan La Ogeen Khasaarihii halkaasi ka Dhashay.
hadaladan ka Soo kala yeeray Dhinacyada Mucaaradka Liibiya iyo Neto Ayaa waxaa uu imaanaya Iyadoo hogaamiyaha dalkaasi liibiya mucaamar al qadaafi Uu Ugu baaqay Neto iyo Mucaardaka in Albaabka wadahadalada uu u furanyahay islamarkaasna uu diyaar U yahay In uu wadahadal lagu soo Afjaro dagaalka Liibiya.
Ciidamada Yemen Oo labo Qof Ku toogtay magaalada Cadan.
Sida Ay xaqiijinayaan saraakiisha caafimaadka yeman Waxaa sacadihii la Soo dhaafay Ciidamada Amaanka Yeman Ay ku dileen Magaalada cadan labo kamid Ah dadka banaanbaxyda logu soo horjeedo dowlada kawada wadankaasi Yeman.
Ciidamada dowlada Yeman Ayaa Maanta waxaa ay ku dhaqaqeen talaabo Dheeri Ah Oo Aan horay loga baran Iyagoo gantaalo culus ku garaacay degaano dad rayid ah Ay daganyihiin Islamarkaasna Ay halkaasi ku gubteen guro Aad U tiro badan.
kumaan kun oo qof Aya waxaa ay Wili dalbanayaan In Xilka Madaxtinimada dalkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan uu ug dago madaxweyne cali cabdalah saalax ,inkasto Ay Dhibaatooyin Aad u Dran Ay kala kulmayaan ciidamada dowlada oo difaacaya Madaxweynaha.